Haweenay 32 jir ah oo 12 jeer iska soo ridday ilmo 10kii sano ee la soo dhaafay… – Hagaag.com
Haweenay 32 jir ah oo 12 jeer iska soo ridday ilmo 10kii sano ee la soo dhaafay…
Posted on 14 Juunyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Salma waa haweenay 32 jir ah, waxay 12 jeer iska soo ridday ilmo 10kii sano ee la soo dhaafay, kii ugu dambeyey uu ahaa isbuucii hore.
Salma (oo aan ahayn magaceeda runta ah) ayaa ku nool magaalada Tunis ee caasimada Tunisia ka hor inta ayna u guurin iyo seygeeda magaalo xeebeedka Nabeul, halkaasi oo ay ku dhashay gabarteeda oo hadda jirta 8 sano.
Waxay sheegtay in ay jeclaan lahayd in ay carruur badan dhasho, laakiin khilaafka joogtada ah ee kala dhaxeeyey ninkeeda oo mararka qaarkeed garaaci jiray, taasi ayaa ku riday in ay wax ka bedesho fekradeeda.
“Waxaan xusuustaa inan aad uga fakeray camaliyadii ugu horeysay oo aan u sheegay nafteyda in arrimaha ay hagaagi karaan haddii ilmo kale aad u dhashid ninkaada, laakin hadana waxaan ku fekeray haddii furiin yimaado wey fududahay heysashada hal ilmo oo keliya.
Saddex sano ka hor Salma oo la furay iyo gabadheeda waxay la noolaayeen nin ay jecleyd, laakinse aan awoodin in ay is guursadaan. khaladaad ka dhacay dhinaca isticmaalka kaniiniga reebo inay uuraysato ayaa waxay ku qasbanatay in ay iska soo rido ilmo marar badan, waayo ma dooneyn in ay dhasho ilmo si xaaraam ah ku yimid, taasi oo aan bulshadu ogoleyn.
Laakiin uurka aan loo baahnayn (oo aan ku xirneyn sababo caafimaad) ma aha mid ka mid ah dhibaatooyinkeeda, waxay arrintaasi noqotay mid caadi ah, keligeed ayey iska aadaa dhakhtarkeeda si uu uga soo riddo ilmaha.
sharciga Tunisia ayaa ogol in haweenta qaan gaarka ah oo gaartay labaatan sano ay iska soo riddi karto ilmaha aan la rabin wax kasta oo xaaladeeda bulsho ay ahaato ( mid la qabo ama aan la qabin) si lacag la’aan ah, mana u baahna ogolaansho qof kale, sida uu sharaxay Dr. Badr al-Diin Bougura oo madax ka ah qeybta dhaliinka ee isbitaalka Charles Nicolle ee ku yaalo caasimada Tunisia.
Waxaa sanadkii ilmo iska soo ridda 34,000 oo haween, kuwaasi oo 20% kamid ah ay yihiin haween aan la qabin, halka 80% ay yihiin kuwa la qabo.